1628s &quot;LIFT-OFF&quot; | आधिकारिक IAOT? कागजात images and subtitles
यो भिडियो सुरु गर्नु अघि उनीहरूले २०१ World को विश्व यात्राको लगत्तै प्रोजेक्ट सुरू गरे। भ्रमण सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दै जाँदा, डीपीआर नयाँ प्रोजेक्टहरूबाट प्रेरित हुन शुरू भयो। -प्रोजेक्टहरूलाई असंख्य योजना, एकाग्रता, टोली वर्क र जोशको आवश्यकता पर्दछ। यो भिडियो "त्यहाँ कुनै पनि बाहिर छ?" यो भिडियो रिलीज हुनुभन्दा अघि तीन महिना लिइएको थियो, र सम्पूर्ण परियोजनाको अंश हो। यस वृत्तचित्रमा दृश्यहरूले परियोजनाको अन्तिम चरणमा दैनिक कार्य प्रक्रियाहरू देखाउँदछ। -विभिन्न रेकर्डि session सत्रहरू, भिडियो बैठकहरू, एक अर्कासँग कुराकानी। यसले डीपीआरको अप्रभावित र गम्भीर पक्षहरू समावेश गर्दछ, एक पूर्ण स्वतन्त्र मनोरन्जन लेबल र साथीहरूको समूह जसको आगामी सपनाहरू छन्। DPR IAN: नमस्ते? तिमीलाई कस्तो छ? उम ... त्यसैले ... संक्षिप्तमा, मैले सोचिरहेको थिएँ कि यो एल्बमको सम्पूर्ण प्रक्रिया फिल्म गर्न यो कस्तो हुन्छ ... सुरुबाट अन्त्यसम्म उम ... मैले भर्खरै सोचें कि यो राम्रो छ। मानिसहरूलाई पर्दा पछाडि के भइरहेको छ देखाउन। जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, के DPR ले देखाउँदैन। र यसले हामीलाई यो देखाउँछ कि हामी यसमा कत्ति प्रवेश गरिसकेका छौं। हो, मलाई आफ्नो विचार बताउनुहोस्। ठीक छ, सबै ठीक ... नमस्ते। Months महिना एल्बम रिलिज हुनु अघि DPR LIVE: हो, जब मानिसहरूले यो सुन्नेछन्, तिनीहरूले केही महसुस गर्नेछन्। इयान: हो। प्रत्यक्ष: मलाई आशा छ तपाईं अप्रत्याशितबाट प्रभावित हुनुभयो। यो गीत सुन्दै। "यहाँ केहि गइन्छ" बाट "GERONIMO" प्रत्यक्ष: सुन्न मात्र, "ओह, यो मैले आशा गरेको कुरा होइन।" इयान: हो, हो। प्रत्यक्ष: "तिमी किन यतिबिघ्न उत्प्रेरित हुन सक्छौ?" डीपीआर रेम: बस जारी राख्नुहोस्। हवाइजहाज ध्वनि कम गर्नुहोस् यदि तपाईं बीचमा अन्य प्रभावहरू वा ध्वनि काट्नु हुन्छ प्रत्यक्ष: * ध्वनि प्रभाव * Mayday Mayday REM: त्यसोभए यो अझ वास्तविक देखिन्छ। त्यो बाटो, तपाईंले स्पष्ट मार्ग छनौट गर्नुपर्दैन। र स्वाभाविक रूपमा तपाईं अर्को भागमा जान सक्नुहुन्छ। त्यसो भए, यदि हामी अहिले यसलाई हेर्दछौं, जब हामी सँगै छौं, वा, "हाइपर लुप" को थोरै जस्तै त्यहाँ समय हुन्छ जब तपाईं स्टार वार्स जस्ता केही "zoom" गर्नुहुन्छ। यदि तपाईं ती एल ई डीलाई अलि गोल बनाउन सक्नुहुन्छ इयान: पछाडि हेर्नुहोस् र अगाडिबाट हेर्नुहोस् मलाई लाग्छ यो राम्रो हुन्छ यदि यो अलि बढि बाहिर आयो। यो मेरो स्वाद मात्र हो। केहि ... धातु राम्रो देखिन्छ। त्यसोभए तपाईंसँग अन्तिम कोठा छ। त्यसो भए डेभिन क्यामेराको अगाडि उभिनेछन्। र तपाईले भन्नुभयो, "s ** t मोडिएको मानिस पाउँदैन। तिमी गर्दै गर, म म गर्न सक्छु। ” र ढोका खुल्छ र तपाईं जम्प गर्नुहोस्। REM: के यो "NEON" एकैचोटि शूटि? गर्दैछ? इयान: हो, म यो सबै एकै चोटि शूट गर्दैछु। तपाईं यो एकैचोटमा लिन सक्नुहुनेछ ... तपाईलाई थाहा छ, तपाई धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ ... त्यो मैले सोच्न सक्ने कुरा हुनेछ। REM: त्यसपछि ती मध्ये एक घुम्दै ... यो जस्तै अब कसरी लिने तपाईं यहाँ जित्न सक्नुहुने महत्वपूर्ण छ। यो सेट मा। REM: मँ एक धेरै राम्रो प्याकेजिंग सीडी डिजाइन मिल्यो। IAN: ओह साँच्चै? के तपाइँले फेरि फिर्ता गर्नुभयो? REM: मैले यो हाम्रो साथ गरे (CD डिजाइन कलाकार)। स्पेस प्याकेजि। IAN: सुन्दर छ। यो अर्को स्तर हो। REM: यो अर्को स्तर होईन? इयान: मैले त्यो सोचेको छैन। REM: तपाईंलाई थाहा छ यो कत्ति राम्रो छ? Cline: एक पछि एक सुनौं। CREAM: तपाइँले पछाडि स्ट्रि toमा तान्नुपर्नेछ। प्रत्यक्ष: हो, तपाईंले ड्र्याग गर्दा एक "फेड आउट" भावना प्राप्त गर्नुपर्नेछ। REM: तार्किक बोल्दै के तपाइँ तीन वा दुई भिडियो बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ? के यसले तपाईंलाई अधिक सशक्त बनाउनेछ ... यो हो ... प्रत्यक्ष: हो, हो ... यो केवल दया मात्र हो केवल ... हामीले कल्पना गरेका सबै कुरा ... IAN: सहि, सहि। प्रत्यक्ष: मलाई लाग्दैन कि संसारमा मानिसहरूले यो कहिल्यै जान्दछन्। इयान: म अब रोकिएको छु। यो धेरै गाह्रो छ ... केही अधिक जटिल छ। अब हामी के गर्न जाँदैछौं हामीसँग एलिमेन्टहरू प्रयोग गरेर म सकेसम्म कथा कल्पना गर्दैछु। बरु, यदि दिशा हामी कल्पना गर्न जाँदै थियौं भने जान्छौं दिशा परिवर्तन हुनेछ जुन हामी अहिले जारी राख्छौं। यसैकारण हामीले यसमा यो छोडिदियौं त्यहाँ धेरै समस्याहरू थिए। REM: यो मैले सोचे भन्दा फरक बाहिर आयो। डेभिनको समय सकिएको थियो रोममा, सेट डिजाईन मैले कल्पना गरे भन्दा फरक भयो। बस ... सबै कुरा ... पोशाक पनि। हामीले सक्दो गरेका थियौं, तर त्यसले काम गरेन। तपाईं यहाँ थकित हुनुहुन्न। म भर्खरै ... मैले फेरि अनुकूलन गर्नु पर्छ। प्रत्यक्ष: अजीब? इयान: होइन यो भन्दा राम्रो थियो। तर मलाई थाहा छैन किन मैले यसलाई परिवर्तन गरें। यो अलि अनौठो हुनुको एक मात्र कारण गीतका कारण हो। "उह, धनुहरू भयो, धनुहरू पाए" त्यसो भए, CREAM ले यसलाई अधिक प्राकृतिक बनाउँदछ। खैर, त्यो आवाज, हरायो यो पियानो भागमा प्राकृतिक हुनेछ। क्रीम: पहिले केही गरौं। प्रत्यक्ष: पहिले यो गर्नुहोस्। प्रत्यक्ष: लिगेसी तपाईं बस यो लगाउन सक्नुहुन्छ। कडा आवाजमा ए, लाज रमाइलो! इयान: हो, त्यो अलि बढि छ तपाईले महसुस गर्नु पर्छ। २ महिना पहिले एल्बम रिलिज हुनु अघि REM: सुन्तला रंग Eunbyeol (स्टाइलिस्ट): के यो सुन्तला रंग छ? मैले सुन्तला अझै गरिन। यो सुन्तला रंगको हुनु पर्छ। REM: यो ठीक छ र सुन्तला ओह, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, लोगो यो गर्नुभयो? कालो सबैलाई यो मनपर्‍यो। Jeong Geun (स्टाइलिस्ट): म यसलाई मेरो हातबाट हटाउन सक्दिन। REM: सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ केवल दुई मास्क जुन जुन योंग (स्टाइलिस्ट Ashe) छन्: REM: कसरी अनुकूलन? Eunbyeol: यसको छेउमा मास्क स्ट्रिंग जस्तो केहि थियो भने यो राम्रो हुनेछ? तपाईं यसलाई यहाँ यस्तै संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ मलाई यसको जस्तो स्ट्रि need चाहिन्छ REM: मलाई थाहा छ मलाई के थाहा छ। इयान: म सोचिरहेको छु, यदि यदि डाबिनसँग बन्दना वा कालो बाना हुन सक्छ, ताकि म मेरो पक्ष कभर गर्न सक्छु। REM: सायद मलाई त्यो आवाज मन पर्छ। Eunbyeol: यो ठीक छ यदि डेभिनले बन्द गर्छ भने प्रत्यक्ष: अन्त्य? रजत तारा: अन्त। इयान: यो कस्तो छ? के तपाईं हिंड्न सक्नुहुन्छ? के तपाईं सार्न सक्नुहुन्छ? प्रत्यक्ष: हो, यो सहज छ। इयान: यो तपाईंको झोलामा बाँधिनेछ। प्रत्यक्ष: हो। इयान: ठिक छ। डीपीआरले यस एल्बमको लागि गरेको अथक प्रयासको बावजुद, पूरा नभएको धेरै ट्र्याकहरू र असंख्य डेमोहरू अपूर्ण छन्। जब म्याद नजिकै आउँदैछ, हामी उत्कट रचनात्मक हुन प्रयास गर्दछौं प्रत्यक्ष एक छोटो यात्रा को लागी सोधे र शहर बाट टाढा एक नयाँ सेटिंग मा गाउन गए। प्रत्यक्ष: मलाई लाग्छ यो परिवर्तन गर्न राम्रो हुन्छ ... मान्छे उदाहरण को लागी, "ओउ, र्याप" क्रीम: ओह, म सहज छु। धेरै राम्रो प्रत्यक्ष: कडा परिश्रम गर्नुहोस् ... स्वस्थ खाऊ! स्टन्ट टीम निर्देशक: यदि तपाईले भावना प्राप्त गर्नुभयो भने, जब हामी अब शुट हुन्छौं क्यामेरा सेटिंग्स मिलान गर्न त्यहाँ साना संशोधनहरू गर्दा मलाई लाग्छ तपाईं त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष: हो। म देख्छु। इयान: निन्जा ... निन्जा टर्टल ... राम्रो ~ प्रत्यक्ष: "सम्भावित" [चित्रीकरणको अघिल्लो दिन] इयान: त्यहाँ हेर्नुहोस्। यो बाहिर हुन सकेन? के यो सबै बाहिर हुनु राम्रो हो? यस्तो अवस्थामा? हम्म, यो ठीक छ, ठीक छ। [चलचित्र शूटिंग दिन] REM: के म पनि यो लिनु पर्छ? जुनवाँग: हो हो। त्यो पनि Cline: म? मैले पार्क गरेको बेला अलि रोकें। Yongwoo (प्रबन्धक): हे, तपाईंले राम्रो काम गर्नुभयो ... CLINE: पार्कि Not होइन, ब्रिज ... इयान: जाऔं ... जाऔं ... Hoin (निर्देशक): यो गर्नुहोस् ... पृथ्वी ... के यो सेतो रंग अहिले छ? Hoin: ओह, तर यो "LEGACY" लुगा हो? प्रत्यक्ष: ओह, यो र्याप भाग हो? इयान: हो। यो सुरुमा यस जस्तै सुरू हुन गइरहेको छ। ठीक छ, कल्पना गर्नुहोस् यो "NEON" हो। तर "LEGACY" उही दृश्यबाट सुरू हुन्छ, तर तपाईं अहिले मंगलवार हुनुहुन्छ। जुनवाँग: म भर्खरै भागेँ। यसलाई अनप्याक गर्नुहोस् REM: यो प्रकाश छैन। मलाई लाग्छ यो पसिनाको कारणले हो। सहायक निर्देशक: तपाई सास लिदै हुनुहुन्छ? इयान: यो ठीक छ। ड्रोन ड्राइभर (किम नान-चान) के तपाईंले धुवाँ स्प्रे गर्नुभयो? Mod: धुवाँ! प्रत्यक्ष: ठीक छ। इयान: यो तपाईको हातमा पर्नेछ। ठीक छ? त्यसोभए, जब यो खस्छ, तपाईं यसलाई समात्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष: अर्को एक पटक यो गरौं। इयान: के तपाई यसलाई अझ एक पटक गर्न चाहानुहुन्छ? तपाई बटनलाई छोइरहनु भएको छ स्विच उचाई तपाईं वास्तवमा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। योong्गू: डाबिन, तपाईंले त्यहाँ जानु पर्छ। CLINE: दिन २ IAN: दिन २ शीतल म एक सिनेमा थिएटरमा छु जस्तो लाग्छ। हामीले गर्ने कुरा यस्तै हो। पक्कै "स्पेस ओडिसी" र "स्टार वार्स" धेरै प्रभाव गरिएको छ। म ठूलो भएपछि देखेको सबै कुरा अब, हामी यहाँ ... Geronimo कार्य ... ! अगाडि क्यामेराको साथ, उदाहरणका लागि ... यो एकदम रमाईलो छैन? यो जस्तो केहि छ। तपाईं फेन्सि be भएको नाटक गर्न सक्नुहुन्छ ऊर्जा संग ... रमाइलो गर्नुहोस्। म जाँदै छु! REM: त्यो छ, यो छ! कर्ट! आउनुहोस्! त्यो हो! इयान: उठ्नुहोस् ... म तर्फ हेर्दै छु। प्रत्यक्ष: ठीक छ। IAN: ठीक छ, सबै माथि, सबै भन्दा बढि। यो सकियो, भाइ। हो यो सकियो! सहायक निर्देशक: राम्रो काम! राम्रो काम! १ महिना एल्बम रिलिज हुनु अघि [मिक्सिंग स्टुडियो] REM: दुबै भागहरूलाई त्याग आवश्यक छ। मलाई लाग्दैन कि हामी कलातिर धेरै टाढा जानु पर्छ। उदाहरण को लागी, "ओह, हामीले यो डेसिबल थोरै बढ्नु पर्छ ..." यो जस्तै हो, म यो फेरि एकपटक गर्न सक्छु। तर हामी पछाडि जाने छैनौं। किनभने जब यो हुन्छ, सबै ढिलाइ हुन्छ। इयान: तर यो ... REM: यदि हामी ढिला छौं तर म पक्का छु कि यो १०० प्रतिशत, ढिला। 99 प्रतिशत ढिला हुनेछ। व्यक्तिलाई बताउन को लागी जो यो हेरिरहेको छ हामी वास्तवमै नजीक आउँदैछौं। र मेरो भूमिकामा सबैको लागि यो सबैभन्दा तनावपूर्ण चीज हो। त्यसो भए, हामी सबै यहाँ छौं हामी एक अर्कालाई अपडेट गर्दछौं म यी सबै प्याक गर्दैछु ताकि म अन्तिम प्रतिलिपि मास्टरि sendमा पठाउन सक्दछु। म अहिले धेरै तनावग्रस्त छु। स्ट्रिंग निर्देशक: केवल 93 to सम्ममा र पछाडि प्रतिलिपि गर्नुहोस्। मलाई लाग्छ ट्रिमोलोले पछि पनि त्यस्तै गर्नेछ। हालको ट्र्याक "KISS ME" र "NO RESCUE NEEDED" को स्ट्रिंग रेकर्ड गरे पछि टोलीले मिक्स गर्न शुरू गर्यो, संगीत निर्माण प्रकृयाको एक महत्त्वपूर्ण भाग मध्ये एक। जहाँसम्म, समय अवरोध र समयसीमाका कारण, डीपीआर उनीहरूले आफ्नो बाँकी समय कति राम्रोसँग प्रयोग गर्थे भनेर रचनात्मक हुनुपर्‍यो। REM: सबै मिक्सहरू मलाई पठाईएको थियो (क्रीम ईन्जिनियर) र म आज मेमो नोटहरू हो ... हामी सँगै चीजहरू व्यवस्थित गर्न जाँदैछौं र डाबिनलाई अन्तिम जाँच प्राप्त गर्न भनौं। प्रत्यक्ष: त्यसोभए ... दिन (x9) अधिक ... अगाडि ... अगाडि हुक मा मलाई लाग्दैन यो एक बिट फिट छ लोभ पनि केहि छ ... "ओह ओह" यो यस्तो भयो ... आवश्यकताहरू मात्रै ... "ओह" इयान: यो यस्तो जस्तो लाग्न सक्छ ... तह द्वारा तह। प्रत्यक्ष: "त्यसैले मैले हिट गरें"… IAN: सहि, सहि, सहि। के त्यहाँ कुनै आवाज छ जुन यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ? प्रत्यक्ष: त्यो रेकर्ड गर्नुहोस्। प्रत्यक्ष र इयान: ओह, यो अन्तिम थियो, अन्तिम एक। प्रत्यक्ष: सुन्नुहोस्। IAN: ध्वनि खोल्नुहोस्। इयान: यो मूल के हो? REM: यो कम छ। IAN: सहि, सहि। म हुँ ... तर म यसको अधिक बानी छु। REM: म यस भन्दा बढी प्रयोग गर्दै छु। ठीक छ ~ इयान: म "यहाँ केहि पनि गइहाल्दैन" को कोरस खेल्दै छु। म यो गीत look० जनाले भाग लिएको जस्तो देखाउन कोशिश गर्दैछु। यो सजिलो छैन। ठीक छ, सुनौं। प्रत्यक्ष: ठीक छ ठीक छ ठीक छ हो यो अब सकियो। यो गीत ... अर्को गीत अझै छ। अब, म अब के गर्न जाँदैछु "NEON" अन्त्य हुन्छ जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, गीतहरू भनिरहन्छन् "तपाईंको चुम्बनले मलाई जान दिन्छ" वा "तपाईंको चुम्बनले यसलाई जान, नियोन, नियन" बनाउँदछ मलाई लाग्छ यो राम्रो छ कोरस अंश पनि रमाईलो छ। यसलाई "नियन" भनिन्छ मलाई लाग्दैन कि मानिसहरू "नियोन" देख्न र महसुस गर्न सक्दछन्। तिमीलाई थाहा छ मेरो मतलब के हो? त्यसो भए म पक्का छैन इयान: ठीक छ ... मलाई लाग्छ यो राम्रो छ। प्रत्यक्ष: त्यसपछि "बैजनी, निलो, बैजनी, गुलाबी" पछि "तपाईं" भन्नुहोस्। IAN: ठीक छ। मलाई लाग्छ कि पर्याप्त छ मलाई लाग्छ यो सकियो मिक्सन, सम्पादन र रेकर्डिंग जुन कहिले सँधै समाप्त हुँदैन जस्तो लाग्दछ अन्तमा समाप्त हुन्छ। मिश्रण समाप्त भएको छ र यो समय मास्टरि stud स्टुडियोमा जानको लागि हो ... प्रत्यक्ष: मास्टर्स क्रीम: यो ठीक छ। अद्भुत लाइभ: तपाइँ यो सबैको बारे के सोच्नुहुन्छ? मलाई लाग्दछ कि "कुनै पनि आवश्यक छैन" को अन्त्य महत्त्वपूर्ण छ CREAM: आउनुहोस् हामी यहाँ रोक्न ... आवाज आउनु भन्दा पहिले प्राविधिक निर्देशक: मलाई गाह्रो समय थियो। REM: होइन, भाइ। प्रत्यक्ष: म प्रायः आउँछु। REM: मेरो भाइ पनि खेल्न आउँछ। प्राविधिक निर्देशक: मैले खेल खेल्नु पर्छ ... क्रीम: मेरो भाई पनि व्यस्त छ ..? [टिजर रिलीज मिति] योंगवु: यो वास्तवमै राम्रो छ। रजत सितारा: पक्कै होइन। IAN: मलाई थाहा छ, तर ... REM: मैले यसलाई Vimeo बाट टिजर 4k HD मा डाउनलोड गरें। IAN: 4k थोरै अँध्यारो छ ... त्यसैले REM: रोक्नुहोस्। शान्त REM: तपाईं एक अनौठो औषधी लिनुभयो। तपाईंले 4k नामक औषधि लिनुभयो। इयान: होईन ... यो व्यवसायिक रोग हो ... REM: होईन। यो केवल एक "बेकार रोग" हो। इयान: मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। मलाई थाहा छ त्यहाँ कुनै ठूलो भिन्नता छैन ... प्रत्यक्ष: minutes मिनेट Minutes मिनेट बाँकी CREAM: तपाईं संग शुरू गर्नुहोस् प्रत्यक्ष: २ मिनेट के संसार तयार छ? के संसार तयार छ? मलाई लाग्दैन म तयार छु ओह! मैले यसलाई अपलोड गरें !!! क्रीम र रजत सितारा: के तपाईंले यसलाई अपलोड गर्नुभयो? IAN: मेरो 101 वें संपादन सत्रमा स्वागत छ। यो मेरो सानो घर स्टूडियो हो। मलाई मेरो घरमा सम्पादन गर्न मनपर्दछ। किनकि यसले मलाई सान्त्वना दिन्छ किनभने यो एक छ लोरी: म ... कृपया मास्टर ... अब, म "LEGACY" सम्पादन गर्दैछु। र यो पहिलो संगीत भिडियो रिलिज हुनेछ। सम्पादन मेरो योजना को बारे मा 60-70% हुनेछ बाँकीहरू योजना गर्दैछन्, शूटिंग गर्दै ... राम्रो लाग्दछ। त्यसैले यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने यस भिडियोको अर्थ दा विन यो नयाँ ब्रह्माण्डमा आएको छ। यो कुरा थियो। एल्बम "कुनै पनि बाहिर छ" यो नयाँ "डीपीआर ब्रह्माण्ड" को यात्रा हो जुन हामी हाल बनाउँदै छौं। यो केवल सुरूवात हो। हिमशिलाको टिप यो खेल खेल्नु जस्तै हो। मलाई लाग्छ हामीले त्यहाँ थोरै लेन्स दराज राख्नु पर्छ। यदि तपाईं सुन्तला हटाउनुहुन्छ भने ... मेरो अनुहार हराउछ ... समीक्षा र अन्तिम सम्पादन पछि संगीत भिडियो टोलीले एक संगीत भिडियो प्रीमियर र रचनात्मक सहयोगीहरूको साथ एल्बम सुन्ने सत्र आयोजित गर्‍यो। - @ आईसेउल REM: XX जाऔं KK: DAMN REM: यो को गर्छ? TK & KK: दाँया (x3) KK: रोम (IAN) xx म बिरामी छु, xx प्रत्यक्ष: म खुसी छु किनभने मैले यस्तो प्रतिक्रिया देखायो। KK: फ्यानहरू कहिले थाहा पाउँदैनन्। मलाई के हुन्छ थाहा छैन। पागल वास्तविक त्यहाँ केहि कमी छैन। TK: ठीक छ, यदि मैले अन्य प्रोजेक्टहरूमा हेर्छु भने, संगीत राम्रो छ भने, भिडियो अलि अभाव छ। त्यहाँ अभाव छ। REM: कमजोर लिंक KK: इमान्दार हुन, म केहि पनि सोच्न सक्दिन (तपाईं जस्तो टोली) त्यो पागल हो। एल्बम रिलिज मिति प्रत्यक्ष:। 37 मिनेट म चिन्तित छु। REM: हामी तपाईं भन्दा धेरै नर्भस छौं! प्रत्यक्ष: यो भावना साँच्चै हो ... यो मेरो पहिलो प्रेमिका भन्दा हिलाउँदै छ तपाईं पागल हुनुहुन्छ? के तपाई तयार हुनुहुन्छ? मलाई लाग्दैन म तयार छु। इयान: प्रतिक्रिया कस्तो छ? के सुझावहरू छन्? प्रत्यक्ष: माथिकोबाट पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्। गुहियो (ड्रमर): १० मिनेट REM: सबैजना तयार! प्रत्यक्ष: हे भगवान रेम: मलाई लाग्छ म स्काइडाइभि। गर्दैछु। प्रत्यक्ष: यस्तो महसुस हुन्छ। Harim (bass): ओह! एक मिनेट बाँकी! आह! बाहिर आउँछ बाहिर आउँछ!
&quot;LIFT-OFF&quot; | आधिकारिक IAOT? कागजात
< start="2.06" dur="3.94"> यो भिडियो सुरु गर्नु अघि उनीहरूले २०१ World को विश्व यात्राको लगत्तै प्रोजेक्ट सुरू गरे। >
< start="6" dur="6"> भ्रमण सफलतापूर्वक अगाडि बढ्दै जाँदा, डीपीआर नयाँ प्रोजेक्टहरूबाट प्रेरित हुन शुरू भयो। -प्रोजेक्टहरूलाई असंख्य योजना, एकाग्रता, टोली वर्क र जोशको आवश्यकता पर्दछ। >
< start="12" dur="6"> यो भिडियो "त्यहाँ कुनै पनि बाहिर छ?" यो भिडियो रिलीज हुनुभन्दा अघि तीन महिना लिइएको थियो, र सम्पूर्ण परियोजनाको अंश हो। >
< start="18" dur="6.4"> यस वृत्तचित्रमा दृश्यहरूले परियोजनाको अन्तिम चरणमा दैनिक कार्य प्रक्रियाहरू देखाउँदछ। -विभिन्न रेकर्डि session सत्रहरू, भिडियो बैठकहरू, एक अर्कासँग कुराकानी। >
< start="24.42" dur="6.6"> यसले डीपीआरको अप्रभावित र गम्भीर पक्षहरू समावेश गर्दछ, एक पूर्ण स्वतन्त्र मनोरन्जन लेबल र साथीहरूको समूह जसको आगामी सपनाहरू छन्। >
< start="40.02" dur="1"> DPR IAN: नमस्ते? >
< start="41.82" dur="1.08"> तिमीलाई कस्तो छ? >
< start="44.3" dur="1.2"> त्यसैले ... >
< start="45.5" dur="10.7"> संक्षिप्तमा, मैले सोचिरहेको थिएँ कि यो एल्बमको सम्पूर्ण प्रक्रिया फिल्म गर्न यो कस्तो हुन्छ ... >
< start="56.68" dur="2.32"> सुरुबाट अन्त्यसम्म >
< start="59" dur="2.08"> उम ... मैले भर्खरै सोचें कि यो राम्रो छ। >
< start="61.92" dur="2.86"> मानिसहरूलाई पर्दा पछाडि के भइरहेको छ देखाउन। >
< start="64.78" dur="2.62"> जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, के DPR ले देखाउँदैन। >
< start="67.52" dur="1.96"> र यसले हामीलाई यो देखाउँछ कि हामी यसमा कत्ति प्रवेश गरिसकेका छौं। >
< start="70.38" dur="2.04"> हो, मलाई आफ्नो विचार बताउनुहोस्। >
< start="73.08" dur="2.08"> ठीक छ, सबै ठीक ... नमस्ते। >
< start="75.88" dur="2"> Months महिना एल्बम रिलिज हुनु अघि >
< start="90.88" dur="3.42"> DPR LIVE: हो, जब मानिसहरूले यो सुन्नेछन्, तिनीहरूले केही महसुस गर्नेछन्। >
< start="94.3" dur="0.96"> इयान: हो। >
< start="95.84" dur="3.28"> प्रत्यक्ष: मलाई आशा छ तपाईं अप्रत्याशितबाट प्रभावित हुनुभयो। यो गीत सुन्दै। >
< start="99.44" dur="1.84"> "यहाँ केहि गइन्छ" बाट "GERONIMO" >
< start="101.66" dur="3.66"> प्रत्यक्ष: सुन्न मात्र, "ओह, यो मैले आशा गरेको कुरा होइन।" >
< start="105.32" dur="0.58"> इयान: हो, हो। >
< start="106.08" dur="2.28"> प्रत्यक्ष: "तिमी किन यतिबिघ्न उत्प्रेरित हुन सक्छौ?" >
< start="109.46" dur="1.16"> डीपीआर रेम: बस जारी राख्नुहोस्। >
< start="113.3" dur="1.9"> हवाइजहाज ध्वनि कम गर्नुहोस् >
< start="115.2" dur="1.18"> यदि तपाईं बीचमा अन्य प्रभावहरू वा ध्वनि काट्नु हुन्छ >
< start="116.38" dur="1.66"> प्रत्यक्ष: * ध्वनि प्रभाव * Mayday Mayday >
< start="118.04" dur="1.12"> REM: त्यसोभए यो अझ वास्तविक देखिन्छ। >
< start="119.98" dur="4.22"> त्यो बाटो, तपाईंले स्पष्ट मार्ग छनौट गर्नुपर्दैन। >
< start="124.7" dur="2.38"> र स्वाभाविक रूपमा तपाईं अर्को भागमा जान सक्नुहुन्छ। >
< start="127.1" dur="5.1"> त्यसो भए, यदि हामी अहिले यसलाई हेर्दछौं, जब हामी सँगै छौं, >
< start="132.22" dur="2.6"> वा, "हाइपर लुप" को थोरै जस्तै >
< start="134.82" dur="2.62"> त्यहाँ समय हुन्छ जब तपाईं स्टार वार्स जस्ता केही "zoom" गर्नुहुन्छ। >
< start="137.44" dur="3.42"> यदि तपाईं ती एल ई डीलाई अलि गोल बनाउन सक्नुहुन्छ >
< start="140.86" dur="2.96"> इयान: पछाडि हेर्नुहोस् र अगाडिबाट हेर्नुहोस् >
< start="144.02" dur="4.18"> मलाई लाग्छ यो राम्रो हुन्छ यदि यो अलि बढि बाहिर आयो। >
< start="148.2" dur="2.62"> यो मेरो स्वाद मात्र हो। >
< start="151.46" dur="4.08"> केहि ... धातु राम्रो देखिन्छ। >
< start="155.54" dur="1.7"> त्यसोभए तपाईंसँग अन्तिम कोठा छ। >
< start="157.24" dur="3"> त्यसो भए डेभिन क्यामेराको अगाडि उभिनेछन्। >
< start="160.38" dur="3.16"> र तपाईले भन्नुभयो, "s ** t मोडिएको मानिस पाउँदैन। तिमी गर्दै गर, म म गर्न सक्छु। ” >
< start="163.68" dur="2"> र ढोका खुल्छ र तपाईं जम्प गर्नुहोस्। >
< start="165.68" dur="0.92"> REM: के यो "NEON" एकैचोटि शूटि? गर्दैछ? >
< start="167.1" dur="2"> इयान: हो, म यो सबै एकै चोटि शूट गर्दैछु। >
< start="169.1" dur="1.62"> तपाईं यो एकैचोटमा लिन सक्नुहुनेछ ... >
< start="171.22" dur="1.08"> तपाईलाई थाहा छ, तपाई धेरै कुराहरु गर्न सक्नुहुन्छ ... >
< start="172.32" dur="1.26"> त्यो मैले सोच्न सक्ने कुरा हुनेछ। >
< start="173.58" dur="2.98"> REM: त्यसपछि ती मध्ये एक >
< start="176.56" dur="1.36"> घुम्दै ... यो जस्तै >
< start="179.44" dur="1.48"> अब कसरी लिने >
< start="180.92" dur="1.86"> तपाईं यहाँ जित्न सक्नुहुने महत्वपूर्ण छ। >
< start="183.28" dur="1.58"> यो सेट मा। >
< start="184.86" dur="2"> REM: मँ एक धेरै राम्रो प्याकेजिंग सीडी डिजाइन मिल्यो। >
< start="187.08" dur="1.54"> IAN: ओह साँच्चै? के तपाइँले फेरि फिर्ता गर्नुभयो? >
< start="188.62" dur="0.74"> REM: मैले यो हाम्रो साथ गरे (CD डिजाइन कलाकार)। >
< start="189.36" dur="2.54"> स्पेस प्याकेजि। >
< start="193" dur="1.9"> IAN: सुन्दर छ। यो अर्को स्तर हो। >
< start="194.9" dur="1.4"> REM: यो अर्को स्तर होईन? >
< start="197.34" dur="1.18"> इयान: मैले त्यो सोचेको छैन। >
< start="198.52" dur="1.4"> REM: तपाईंलाई थाहा छ यो कत्ति राम्रो छ? >
< start="216.36" dur="1.74"> Cline: एक पछि एक सुनौं। >
< start="246.68" dur="2.38"> CREAM: तपाइँले पछाडि स्ट्रि toमा तान्नुपर्नेछ। >
< start="249.06" dur="2.66"> प्रत्यक्ष: हो, तपाईंले ड्र्याग गर्दा एक "फेड आउट" भावना प्राप्त गर्नुपर्नेछ। >
< start="261.6" dur="1.96"> REM: तार्किक बोल्दै >
< start="263.94" dur="2.04"> के तपाइँ तीन वा दुई भिडियो बनाउन जाँदै हुनुहुन्छ? >
< start="266.9" dur="2.62"> के यसले तपाईंलाई अधिक सशक्त बनाउनेछ ... यो हो ... >
< start="273.86" dur="2.22"> प्रत्यक्ष: हो, हो ... यो केवल दया मात्र हो >
< start="276.26" dur="2.6"> केवल ... हामीले कल्पना गरेका सबै कुरा ... >
< start="279.7" dur="0.84"> IAN: सहि, सहि। >
< start="280.54" dur="2.62"> प्रत्यक्ष: मलाई लाग्दैन कि संसारमा मानिसहरूले यो कहिल्यै जान्दछन्। >
< start="285.18" dur="1.04"> इयान: म अब रोकिएको छु। >
< start="288.88" dur="1.38"> यो धेरै गाह्रो छ ... >
< start="292.72" dur="2.92"> केही अधिक जटिल छ। >
< start="298.1" dur="2.8"> अब हामी के गर्न जाँदैछौं हामीसँग एलिमेन्टहरू प्रयोग गरेर >
< start="300.9" dur="2.78"> म सकेसम्म कथा कल्पना गर्दैछु। >
< start="306.36" dur="3.2"> बरु, यदि दिशा हामी कल्पना गर्न जाँदै थियौं भने जान्छौं >
< start="309.56" dur="4.02"> दिशा परिवर्तन हुनेछ जुन हामी अहिले जारी राख्छौं। >
< start="314.08" dur="3.7"> यसैकारण हामीले यसमा यो छोडिदियौं >
< start="318.2" dur="2.4"> त्यहाँ धेरै समस्याहरू थिए। >
< start="320.6" dur="2.54"> REM: यो मैले सोचे भन्दा फरक बाहिर आयो। >
< start="323.34" dur="0.96"> डेभिनको समय सकिएको थियो >
< start="324.3" dur="1.04"> रोममा, सेट डिजाईन मैले कल्पना गरे भन्दा फरक भयो। >
< start="325.34" dur="2.5"> बस ... सबै कुरा ... पोशाक पनि। >
< start="328.22" dur="2.32"> हामीले सक्दो गरेका थियौं, तर त्यसले काम गरेन। >
< start="330.96" dur="2.6"> तपाईं यहाँ थकित हुनुहुन्न। म भर्खरै ... मैले फेरि अनुकूलन गर्नु पर्छ। >
< start="338.06" dur="1.26"> प्रत्यक्ष: अजीब? >
< start="341.04" dur="1"> इयान: होइन यो भन्दा राम्रो थियो। >
< start="342.46" dur="1.24"> तर मलाई थाहा छैन किन मैले यसलाई परिवर्तन गरें। >
< start="344.46" dur="3.02"> यो अलि अनौठो हुनुको एक मात्र कारण गीतका कारण हो। >
< start="347.48" dur="2.38"> "उह, धनुहरू भयो, धनुहरू पाए" >
< start="350.4" dur="2"> त्यसो भए, CREAM ले यसलाई अधिक प्राकृतिक बनाउँदछ। >
< start="353.1" dur="1.52"> खैर, त्यो आवाज, हरायो >
< start="355.18" dur="2.12"> यो पियानो भागमा प्राकृतिक हुनेछ। >
< start="357.3" dur="1.22"> क्रीम: पहिले केही गरौं। >
< start="358.52" dur="1.18"> प्रत्यक्ष: पहिले यो गर्नुहोस्। >
< start="379.06" dur="0.68"> प्रत्यक्ष: लिगेसी >
< start="379.74" dur="1.02"> तपाईं बस यो लगाउन सक्नुहुन्छ। >
< start="382.58" dur="1.9"> कडा आवाजमा >
< start="390.58" dur="0.9"> ए, लाज रमाइलो! >
< start="391.8" dur="1.68"> इयान: हो, त्यो अलि बढि छ >
< start="393.98" dur="1.1"> तपाईले महसुस गर्नु पर्छ। >
< start="418.6" dur="2.46"> २ महिना पहिले एल्बम रिलिज हुनु अघि >
< start="426.64" dur="0.88"> REM: सुन्तला रंग >
< start="427.78" dur="1.78"> Eunbyeol (स्टाइलिस्ट): के यो सुन्तला रंग छ? मैले सुन्तला अझै गरिन। >
< start="430.98" dur="0.76"> यो सुन्तला रंगको हुनु पर्छ। >
< start="431.74" dur="2.08"> REM: यो ठीक छ र सुन्तला >
< start="433.82" dur="1.74"> ओह, प्रतीक्षा गर्नुहोस्, लोगो यो गर्नुभयो? >
< start="436.16" dur="0.82"> कालो >
< start="437.44" dur="1.38"> सबैलाई यो मनपर्‍यो। >
< start="439.16" dur="0.98"> Jeong Geun (स्टाइलिस्ट): म यसलाई मेरो हातबाट हटाउन सक्दिन। >
< start="440.14" dur="2.22"> REM: सबै भन्दा पहिले, त्यहाँ केवल दुई मास्क जुन जुन योंग (स्टाइलिस्ट Ashe) छन्: >
< start="442.36" dur="0.88"> REM: कसरी अनुकूलन? >
< start="443.24" dur="4.54"> Eunbyeol: यसको छेउमा मास्क स्ट्रिंग जस्तो केहि थियो भने यो राम्रो हुनेछ? >
< start="450.06" dur="2.74"> तपाईं यसलाई यहाँ यस्तै संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="453.38" dur="1.92"> मलाई यसको जस्तो स्ट्रि need चाहिन्छ >
< start="455.76" dur="1.5"> REM: मलाई थाहा छ मलाई के थाहा छ। >
< start="457.96" dur="1.46"> इयान: म सोचिरहेको छु, यदि >
< start="459.42" dur="3.22"> यदि डाबिनसँग बन्दना वा कालो बाना हुन सक्छ, >
< start="462.64" dur="2.2"> ताकि म मेरो पक्ष कभर गर्न सक्छु। REM: सायद >
< start="464.84" dur="0.86"> मलाई त्यो आवाज मन पर्छ। >
< start="478.92" dur="2.74"> Eunbyeol: यो ठीक छ यदि डेभिनले बन्द गर्छ भने >
< start="482.04" dur="0.58"> प्रत्यक्ष: अन्त्य? >
< start="482.62" dur="0.84"> रजत तारा: अन्त। >
< start="485.04" dur="2.24"> इयान: यो कस्तो छ? के तपाईं हिंड्न सक्नुहुन्छ? के तपाईं सार्न सक्नुहुन्छ? >
< start="487.78" dur="1.76"> प्रत्यक्ष: हो, यो सहज छ। >
< start="489.92" dur="2.26"> इयान: यो तपाईंको झोलामा बाँधिनेछ। >
< start="492.18" dur="0.58"> प्रत्यक्ष: हो। >
< start="494.34" dur="1"> इयान: ठिक छ। >
< start="496.28" dur="3.46"> डीपीआरले यस एल्बमको लागि गरेको अथक प्रयासको बावजुद, >
< start="499.74" dur="3.16"> पूरा नभएको धेरै ट्र्याकहरू र असंख्य डेमोहरू अपूर्ण छन्। >
< start="502.9" dur="3.48"> जब म्याद नजिकै आउँदैछ, हामी उत्कट रचनात्मक हुन प्रयास गर्दछौं >
< start="506.38" dur="2.96"> प्रत्यक्ष एक छोटो यात्रा को लागी सोधे र शहर बाट टाढा एक नयाँ सेटिंग मा गाउन गए। >
< start="510.26" dur="2.3"> प्रत्यक्ष: मलाई लाग्छ यो परिवर्तन गर्न राम्रो हुन्छ ... मान्छे >
< start="512.56" dur="2.26"> उदाहरण को लागी, "ओउ, र्याप" >
< start="533.64" dur="2"> क्रीम: ओह, म सहज छु। >
< start="535.64" dur="0.9"> धेरै राम्रो >
< start="551.4" dur="1.28"> प्रत्यक्ष: कडा परिश्रम गर्नुहोस् ... >
< start="552.68" dur="1.04"> स्वस्थ खाऊ! >
< start="588.64" dur="3"> स्टन्ट टीम निर्देशक: यदि तपाईले भावना प्राप्त गर्नुभयो भने, जब हामी अब शुट हुन्छौं >
< start="591.64" dur="1.5"> क्यामेरा सेटिंग्स मिलान गर्न >
< start="593.14" dur="1.76"> त्यहाँ साना संशोधनहरू गर्दा >
< start="594.9" dur="0.74"> मलाई लाग्छ तपाईं त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। >
< start="595.64" dur="1.14"> प्रत्यक्ष: हो। म देख्छु। >
< start="609.3" dur="1.92"> इयान: निन्जा ... >
< start="611.22" dur="0.86"> निन्जा टर्टल ... >
< start="613.4" dur="0.9"> राम्रो ~ >
< start="616.06" dur="0.86"> प्रत्यक्ष: "सम्भावित" >
< start="619.42" dur="1.94"> [चित्रीकरणको अघिल्लो दिन] >
< start="631" dur="1.52"> इयान: त्यहाँ हेर्नुहोस्। >
< start="640.8" dur="2.6"> यो बाहिर हुन सकेन? के यो सबै बाहिर हुनु राम्रो हो? >
< start="644.52" dur="1.68"> यस्तो अवस्थामा? >
< start="668.54" dur="1.36"> हम्म, यो ठीक छ, ठीक छ। >
< start="674.12" dur="1.88"> [चलचित्र शूटिंग दिन] >
< start="676.5" dur="1.52"> REM: के म पनि यो लिनु पर्छ? >
< start="678.02" dur="1.08"> जुनवाँग: हो हो। त्यो पनि >
< start="683.14" dur="2.2"> Cline: म? मैले पार्क गरेको बेला अलि रोकें। >
< start="686.56" dur="1.38"> Yongwoo (प्रबन्धक): हे, तपाईंले राम्रो काम गर्नुभयो ... >
< start="687.94" dur="0.72"> CLINE: पार्कि Not होइन, ब्रिज ... >
< start="689.14" dur="0.9"> इयान: जाऔं ... >
< start="690.92" dur="1.02"> जाऔं ... >
< start="718.7" dur="3.86"> Hoin (निर्देशक): यो गर्नुहोस् ... पृथ्वी ... के यो सेतो रंग अहिले छ? >
< start="729.14" dur="1.64"> Hoin: ओह, तर यो "LEGACY" लुगा हो? प्रत्यक्ष: ओह, यो र्याप भाग हो? >
< start="731.28" dur="1.58"> इयान: हो। यो सुरुमा यस जस्तै सुरू हुन गइरहेको छ। >
< start="732.86" dur="1.46"> ठीक छ, कल्पना गर्नुहोस् यो "NEON" हो। >
< start="734.32" dur="3.38"> तर "LEGACY" उही दृश्यबाट सुरू हुन्छ, तर तपाईं अहिले मंगलवार हुनुहुन्छ। >
< start="756.62" dur="3.22"> जुनवाँग: म भर्खरै भागेँ। यसलाई अनप्याक गर्नुहोस् >
< start="759.84" dur="1.64"> REM: यो प्रकाश छैन। >
< start="761.48" dur="1.3"> मलाई लाग्छ यो पसिनाको कारणले हो। >
< start="771" dur="0.88"> सहायक निर्देशक: तपाई सास लिदै हुनुहुन्छ? >
< start="783.32" dur="0.88"> इयान: यो ठीक छ। >
< start="785.82" dur="1.2"> ड्रोन ड्राइभर (किम नान-चान) के तपाईंले धुवाँ स्प्रे गर्नुभयो? >
< start="787.02" dur="1.12"> Mod: धुवाँ! >
< start="791.26" dur="0.72"> प्रत्यक्ष: ठीक छ। >
< start="791.98" dur="1.16"> इयान: यो तपाईको हातमा पर्नेछ। >
< start="793.86" dur="0.92"> ठीक छ? >
< start="794.78" dur="1.32"> त्यसोभए, जब यो खस्छ, तपाईं यसलाई समात्नुहुन्छ। >
< start="804" dur="0.96"> प्रत्यक्ष: अर्को एक पटक यो गरौं। >
< start="804.96" dur="0.74"> इयान: के तपाई यसलाई अझ एक पटक गर्न चाहानुहुन्छ? >
< start="806.18" dur="1.28"> तपाई बटनलाई छोइरहनु भएको छ >
< start="808.14" dur="1.2"> स्विच उचाई >
< start="809.34" dur="1.36"> तपाईं वास्तवमा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ। >
< start="829.76" dur="2.7"> योong्गू: डाबिन, तपाईंले त्यहाँ जानु पर्छ। >
< start="832.62" dur="1.26"> CLINE: दिन २ IAN: दिन २ >
< start="835.14" dur="1.04"> शीतल >
< start="836.48" dur="2.42"> म एक सिनेमा थिएटरमा छु जस्तो लाग्छ। >
< start="839.36" dur="2.06"> हामीले गर्ने कुरा यस्तै हो। >
< start="842.48" dur="2.28"> पक्कै >
< start="844.76" dur="3.46"> "स्पेस ओडिसी" र "स्टार वार्स" धेरै प्रभाव गरिएको छ। >
< start="848.76" dur="2.22"> म ठूलो भएपछि देखेको सबै कुरा >
< start="852.2" dur="1.98"> अब, हामी यहाँ ... Geronimo >
< start="854.66" dur="0.6"> कार्य ... ! >
< start="867.36" dur="1.14"> अगाडि क्यामेराको साथ, उदाहरणका लागि ... >
< start="869.46" dur="1.24"> यो एकदम रमाईलो छैन? >
< start="875.06" dur="1.48"> यो जस्तो केहि छ। >
< start="879.36" dur="2"> तपाईं फेन्सि be भएको नाटक गर्न सक्नुहुन्छ >
< start="882.66" dur="1.76"> ऊर्जा संग ... रमाइलो गर्नुहोस्। >
< start="893.28" dur="0.74"> म जाँदै छु! >
< start="904.06" dur="0.86"> REM: त्यो छ, यो छ! >
< start="904.92" dur="0.5"> कर्ट! >
< start="905.6" dur="1.12"> आउनुहोस्! त्यो हो! >
< start="911.04" dur="0.82"> इयान: उठ्नुहोस् ... >
< start="912.86" dur="1.06"> म तर्फ हेर्दै छु। >
< start="915.56" dur="0.64"> प्रत्यक्ष: ठीक छ। >
< start="958.22" dur="0.96"> IAN: ठीक छ, सबै माथि, सबै भन्दा बढि। >
< start="960" dur="0.98"> यो सकियो, भाइ। >
< start="961.62" dur="1.2"> हो यो सकियो! >
< start="962.82" dur="1"> सहायक निर्देशक: राम्रो काम! >
< start="963.82" dur="2.46"> राम्रो काम! >
< start="968.58" dur="2.44"> १ महिना एल्बम रिलिज हुनु अघि >
< start="971.76" dur="2.72"> [मिक्सिंग स्टुडियो] REM: दुबै भागहरूलाई त्याग आवश्यक छ। >
< start="974.88" dur="2.22"> मलाई लाग्दैन कि हामी कलातिर धेरै टाढा जानु पर्छ। >
< start="977.1" dur="3.6"> उदाहरण को लागी, "ओह, हामीले यो डेसिबल थोरै बढ्नु पर्छ ..." >
< start="980.7" dur="1.52"> यो जस्तै >
< start="982.22" dur="1.32"> हो, म यो फेरि एकपटक गर्न सक्छु। >
< start="983.54" dur="1.6"> तर हामी पछाडि जाने छैनौं। >
< start="985.14" dur="2.24"> किनभने जब यो हुन्छ, सबै ढिलाइ हुन्छ। >
< start="987.78" dur="2.24"> इयान: तर यो ... >
< start="991.82" dur="1.58"> REM: यदि हामी ढिला छौं >
< start="994.12" dur="4.66"> तर म पक्का छु कि यो १०० प्रतिशत, ढिला। 99 प्रतिशत ढिला हुनेछ। >
< start="1004.76" dur="2.16"> व्यक्तिलाई बताउन को लागी जो यो हेरिरहेको छ >
< start="1008.44" dur="2.66"> हामी वास्तवमै नजीक आउँदैछौं। >
< start="1011.5" dur="2.1"> र मेरो भूमिकामा सबैको लागि >
< start="1015.02" dur="2.96"> यो सबैभन्दा तनावपूर्ण चीज हो। >
< start="1018.72" dur="2.02"> त्यसो भए, हामी सबै यहाँ छौं >
< start="1022.02" dur="2.64"> हामी एक अर्कालाई अपडेट गर्दछौं >
< start="1024.66" dur="4.14"> म यी सबै प्याक गर्दैछु ताकि म अन्तिम प्रतिलिपि मास्टरि sendमा पठाउन सक्दछु। >
< start="1031.14" dur="2.42"> म अहिले धेरै तनावग्रस्त छु। >
< start="1050.14" dur="2"> स्ट्रिंग निर्देशक: केवल 93 to सम्ममा र पछाडि प्रतिलिपि गर्नुहोस्। >
< start="1052.14" dur="3.82"> मलाई लाग्छ ट्रिमोलोले पछि पनि त्यस्तै गर्नेछ। >
< start="1066.18" dur="6.52"> हालको ट्र्याक "KISS ME" र "NO RESCUE NEEDED" को स्ट्रिंग रेकर्ड गरे पछि टोलीले मिक्स गर्न शुरू गर्यो, संगीत निर्माण प्रकृयाको एक महत्त्वपूर्ण भाग मध्ये एक। >
< start="1072.7" dur="6.06"> जहाँसम्म, समय अवरोध र समयसीमाका कारण, डीपीआर उनीहरूले आफ्नो बाँकी समय कति राम्रोसँग प्रयोग गर्थे भनेर रचनात्मक हुनुपर्‍यो। >
< start="1081.12" dur="5.6"> REM: सबै मिक्सहरू मलाई पठाईएको थियो (क्रीम ईन्जिनियर) र म आज मेमो नोटहरू हो ... >
< start="1087.32" dur="5.06"> हामी सँगै चीजहरू व्यवस्थित गर्न जाँदैछौं र डाबिनलाई अन्तिम जाँच प्राप्त गर्न भनौं। >
< start="1092.38" dur="3.76"> प्रत्यक्ष: त्यसोभए ... दिन (x9) >
< start="1101.14" dur="2.6"> अधिक ... अगाडि ... अगाडि हुक मा >
< start="1105.14" dur="2.92"> मलाई लाग्दैन यो एक बिट फिट छ >
< start="1108.24" dur="2"> लोभ पनि केहि छ ... >
< start="1110.24" dur="2.36"> "ओह ओह" यो यस्तो भयो ... >
< start="1112.6" dur="3.1"> आवश्यकताहरू मात्रै ... "ओह" >
< start="1126.58" dur="1.24"> इयान: यो यस्तो जस्तो लाग्न सक्छ ... >
< start="1129.22" dur="1.2"> तह द्वारा तह। >
< start="1153.68" dur="0.92"> प्रत्यक्ष: "त्यसैले मैले हिट गरें"… >
< start="1154.6" dur="1"> IAN: सहि, सहि, सहि। >
< start="1156.7" dur="4.14"> के त्यहाँ कुनै आवाज छ जुन यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दछ? >
< start="1164.46" dur="1.16"> प्रत्यक्ष: त्यो रेकर्ड गर्नुहोस्। >
< start="1170.42" dur="2.42"> प्रत्यक्ष र इयान: ओह, यो अन्तिम थियो, अन्तिम एक। >
< start="1172.84" dur="1.32"> प्रत्यक्ष: सुन्नुहोस्। >
< start="1174.16" dur="2"> IAN: ध्वनि खोल्नुहोस्। >
< start="1187.76" dur="1.26"> इयान: यो मूल के हो? >
< start="1191.34" dur="1.7"> REM: यो कम छ। IAN: सहि, सहि। >
< start="1193.04" dur="2.7"> म हुँ ... तर म यसको अधिक बानी छु। >
< start="1196.4" dur="1.24"> REM: म यस भन्दा बढी प्रयोग गर्दै छु। >
< start="1201.2" dur="0.84"> ठीक छ ~ >
< start="1204.46" dur="5.36"> इयान: म "यहाँ केहि पनि गइहाल्दैन" को कोरस खेल्दै छु। >
< start="1209.82" dur="5.22"> म यो गीत look० जनाले भाग लिएको जस्तो देखाउन कोशिश गर्दैछु। >
< start="1215.04" dur="2.74"> यो सजिलो छैन। ठीक छ, सुनौं। >
< start="1217.78" dur="1.82"> प्रत्यक्ष: ठीक छ ठीक छ ठीक छ >
< start="1234.44" dur="1.12"> हो >
< start="1235.56" dur="1.16"> यो अब सकियो। >
< start="1237.5" dur="2.68"> यो गीत ... अर्को गीत अझै छ। >
< start="1256.74" dur="2.58"> अब, म अब के गर्न जाँदैछु "NEON" अन्त्य हुन्छ >
< start="1261.16" dur="2.54"> जस्तो तपाईंलाई थाहा छ, गीतहरू भनिरहन्छन् "तपाईंको चुम्बनले मलाई जान दिन्छ" वा >
< start="1263.7" dur="2.82"> "तपाईंको चुम्बनले यसलाई जान, नियोन, नियन" बनाउँदछ >
< start="1266.52" dur="2.18"> मलाई लाग्छ यो राम्रो छ >
< start="1268.7" dur="1.74"> कोरस अंश पनि रमाईलो छ। >
< start="1270.44" dur="1.54"> यसलाई "नियन" भनिन्छ >
< start="1272.26" dur="3.7"> मलाई लाग्दैन कि मानिसहरू "नियोन" देख्न र महसुस गर्न सक्दछन्। तिमीलाई थाहा छ मेरो मतलब के हो? त्यसो भए >
< start="1282.12" dur="0.86"> म पक्का छैन >
< start="1282.98" dur="1.26"> इयान: ठीक छ ... मलाई लाग्छ यो राम्रो छ। >
< start="1284.24" dur="3.42"> प्रत्यक्ष: त्यसपछि "बैजनी, निलो, बैजनी, गुलाबी" पछि "तपाईं" भन्नुहोस्। >
< start="1287.66" dur="0.56"> IAN: ठीक छ। >
< start="1288.22" dur="2.16"> मलाई लाग्छ कि पर्याप्त छ >
< start="1290.38" dur="1.6"> मलाई लाग्छ यो सकियो >
< start="1291.98" dur="3.44"> मिक्सन, सम्पादन र रेकर्डिंग जुन कहिले सँधै समाप्त हुँदैन जस्तो लाग्दछ अन्तमा समाप्त हुन्छ। >
< start="1295.42" dur="3.64"> मिश्रण समाप्त भएको छ र यो समय मास्टरि stud स्टुडियोमा जानको लागि हो ... >
< start="1300.38" dur="1.22"> प्रत्यक्ष: मास्टर्स >
< start="1314.12" dur="1.24"> क्रीम: यो ठीक छ। अद्भुत लाइभ: तपाइँ यो सबैको बारे के सोच्नुहुन्छ? >
< start="1320.52" dur="3.72"> मलाई लाग्दछ कि "कुनै पनि आवश्यक छैन" को अन्त्य महत्त्वपूर्ण छ >
< start="1324.84" dur="1.84"> CREAM: आउनुहोस् हामी यहाँ रोक्न ... आवाज आउनु भन्दा पहिले >
< start="1333.4" dur="1.04"> प्राविधिक निर्देशक: मलाई गाह्रो समय थियो। >
< start="1334.44" dur="1.16"> REM: होइन, भाइ। >
< start="1336.86" dur="1.06"> प्रत्यक्ष: म प्रायः आउँछु। >
< start="1338.4" dur="1.7"> REM: मेरो भाइ पनि खेल्न आउँछ। >
< start="1340.1" dur="1.64"> प्राविधिक निर्देशक: मैले खेल खेल्नु पर्छ ... >
< start="1341.74" dur="1.1"> क्रीम: मेरो भाई पनि व्यस्त छ ..? >
< start="1344.04" dur="1.08"> [टिजर रिलीज मिति] योंगवु: यो वास्तवमै राम्रो छ। >
< start="1345.12" dur="0.74"> रजत सितारा: पक्कै होइन। >
< start="1347.14" dur="2.68"> IAN: मलाई थाहा छ, तर ... REM: मैले यसलाई Vimeo बाट टिजर 4k HD मा डाउनलोड गरें। >
< start="1349.82" dur="2.68"> IAN: 4k थोरै अँध्यारो छ ... त्यसैले REM: रोक्नुहोस्। शान्त >
< start="1352.5" dur="2.46"> REM: तपाईं एक अनौठो औषधी लिनुभयो। >
< start="1354.96" dur="2.92"> तपाईंले 4k नामक औषधि लिनुभयो। इयान: होईन ... यो व्यवसायिक रोग हो ... >
< start="1357.88" dur="2.66"> REM: होईन। यो केवल एक "बेकार रोग" हो। >
< start="1360.54" dur="1"> इयान: मलाई विश्वास गर्नुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस्। >
< start="1361.94" dur="1.94"> मलाई थाहा छ त्यहाँ कुनै ठूलो भिन्नता छैन ... >
< start="1364.08" dur="1.02"> प्रत्यक्ष: minutes मिनेट >
< start="1368.9" dur="1.24"> Minutes मिनेट बाँकी >
< start="1371.26" dur="1.36"> CREAM: तपाईं संग शुरू गर्नुहोस् >
< start="1373.68" dur="1.08"> प्रत्यक्ष: २ मिनेट >
< start="1374.76" dur="1.3"> के संसार तयार छ? >
< start="1377.1" dur="1.04"> के संसार तयार छ? >
< start="1378.14" dur="1.22"> मलाई लाग्दैन म तयार छु >
< start="1379.88" dur="0.62"> ओह! मैले यसलाई अपलोड गरें !!! >
< start="1382.48" dur="0.88"> क्रीम र रजत सितारा: के तपाईंले यसलाई अपलोड गर्नुभयो? >
< start="1400.32" dur="5.88"> IAN: मेरो 101 वें संपादन सत्रमा स्वागत छ। >
< start="1406.2" dur="2.62"> यो मेरो सानो घर स्टूडियो हो। >
< start="1408.82" dur="2.1"> मलाई मेरो घरमा सम्पादन गर्न मनपर्दछ। >
< start="1410.92" dur="0.9"> किनकि यसले मलाई सान्त्वना दिन्छ >
< start="1411.82" dur="2"> किनभने यो एक छ >
< start="1415.38" dur="1.52"> लोरी: म ... कृपया मास्टर ... >
< start="1417.26" dur="2.84"> अब, म "LEGACY" सम्पादन गर्दैछु। >
< start="1420.1" dur="2.54"> र यो पहिलो संगीत भिडियो रिलिज हुनेछ। >
< start="1422.64" dur="10.46"> सम्पादन मेरो योजना को बारे मा 60-70% हुनेछ >
< start="1433.1" dur="4.98"> बाँकीहरू योजना गर्दैछन्, शूटिंग गर्दै ... >
< start="1440.26" dur="1.28"> राम्रो लाग्दछ। >
< start="1441.54" dur="2.7"> त्यसैले यो भिडियो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। >
< start="1444.24" dur="4.42"> किनभने यस भिडियोको अर्थ दा विन यो नयाँ ब्रह्माण्डमा आएको छ। >
< start="1448.66" dur="0.84"> यो कुरा थियो। >
< start="1449.5" dur="10.06"> एल्बम "कुनै पनि बाहिर छ" यो नयाँ "डीपीआर ब्रह्माण्ड" को यात्रा हो जुन हामी हाल बनाउँदै छौं। >
< start="1459.56" dur="1.8"> यो केवल सुरूवात हो। >
< start="1461.36" dur="1.88"> हिमशिलाको टिप >
< start="1465.18" dur="1.4"> यो खेल खेल्नु जस्तै हो। >
< start="1471.56" dur="2.9"> मलाई लाग्छ हामीले त्यहाँ थोरै लेन्स दराज राख्नु पर्छ। >
< start="1474.92" dur="1.64"> यदि तपाईं सुन्तला हटाउनुहुन्छ भने ... >
< start="1478.62" dur="2.34"> मेरो अनुहार हराउछ ... >
< start="1480.96" dur="2.5"> समीक्षा र अन्तिम सम्पादन पछि संगीत भिडियो >
< start="1483.46" dur="3.38"> टोलीले एक संगीत भिडियो प्रीमियर र रचनात्मक सहयोगीहरूको साथ एल्बम सुन्ने सत्र आयोजित गर्‍यो। - @ आईसेउल >
< start="1499.48" dur="1.76"> REM: XX जाऔं >
< start="1504.9" dur="1.02"> REM: यो को गर्छ? >
< start="1505.92" dur="1.24"> TK & KK: दाँया (x3) >
< start="1507.16" dur="1.46"> KK: रोम (IAN) xx म बिरामी छु, xx >
< start="1508.62" dur="1.84"> प्रत्यक्ष: म खुसी छु किनभने मैले यस्तो प्रतिक्रिया देखायो। >
< start="1527.26" dur="2.34"> KK: फ्यानहरू कहिले थाहा पाउँदैनन्। >
< start="1529.6" dur="3.52"> मलाई के हुन्छ थाहा छैन। >
< start="1533.12" dur="1.38"> पागल वास्तविक >
< start="1534.5" dur="2"> त्यहाँ केहि कमी छैन। >
< start="1536.5" dur="4.74"> TK: ठीक छ, यदि मैले अन्य प्रोजेक्टहरूमा हेर्छु भने, संगीत राम्रो छ भने, भिडियो अलि अभाव छ। >
< start="1541.24" dur="1.22"> त्यहाँ अभाव छ। >
< start="1542.46" dur="0.92"> REM: कमजोर लिंक >
< start="1543.38" dur="3.8"> KK: इमान्दार हुन, म केहि पनि सोच्न सक्दिन (तपाईं जस्तो टोली) >
< start="1547.18" dur="2.22"> त्यो पागल हो। >
< start="1552.06" dur="1.76"> एल्बम रिलिज मिति >
< start="1557.64" dur="1.48"> प्रत्यक्ष:। 37 मिनेट >
< start="1559.12" dur="1.88"> म चिन्तित छु। >
< start="1564.72" dur="3.94"> REM: हामी तपाईं भन्दा धेरै नर्भस छौं! >
< start="1571.52" dur="2.18"> प्रत्यक्ष: यो भावना साँच्चै हो ... >
< start="1573.7" dur="2.02"> यो मेरो पहिलो प्रेमिका भन्दा हिलाउँदै छ >
< start="1575.72" dur="1.48"> तपाईं पागल हुनुहुन्छ? >
< start="1577.2" dur="1.84"> के तपाई तयार हुनुहुन्छ? >
< start="1579.06" dur="1.86"> मलाई लाग्दैन म तयार छु। >
< start="1580.92" dur="1.38"> इयान: प्रतिक्रिया कस्तो छ? के सुझावहरू छन्? >
< start="1582.3" dur="1.8"> प्रत्यक्ष: माथिकोबाट पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्, पढ्नुहोस्। >
< start="1586.2" dur="1.46"> गुहियो (ड्रमर): १० मिनेट >
< start="1589.76" dur="2"> REM: सबैजना तयार! >
< start="1594.5" dur="1.62"> प्रत्यक्ष: हे भगवान >
< start="1596.14" dur="2.68"> रेम: मलाई लाग्छ म स्काइडाइभि। गर्दैछु। >
< start="1598.82" dur="1.48"> प्रत्यक्ष: यस्तो महसुस हुन्छ। >
< start="1601.94" dur="1.54"> Harim (bass): ओह! एक मिनेट बाँकी! >
< start="1611.9" dur="1.36"> आह! बाहिर आउँछ बाहिर आउँछ! >